China Gun drill grinder စက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Deshen
ပစ္စည်း: Tungsten Carbide
ယေဘူယျအားဖြင့် ၁-၄၀၀၀ မီလီမီတာ
Carbide အစွန်အဖျားကျစ်ထားသောတစ်ခုတည်းသောပုလွေ Gundrilling bit သတ္တုတူးဖော်ခြင်း Deep Hole Gundrilling carbide gun Drill Bit
GD-600 Standard gun drill sharpening machine သည်တိကျသောလှိမ့်လမ်းကြောင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်မော်တာကိုသုံးသည်။ လှုပ်ရှားမှုသည်ချောမွေ့ပြီးပွတ်တိုက်မှုမှာသေးငယ်သည်။ ကြိတ်စက်သည်အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်ဖြင့်လှည့်နိုင်သည်။ ချွန်ထက်သော Fixture ကိုစက်ကိရိယာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာသုံးနိုင်ပြီးသေနတ်မျိုးစုံကိုကြိတ်ခွဲနိုင်ပါသည်။ 50Q Gun Drills Gun Drill Sharpening Fixture သည်အထူးကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ရည်စူး၍ အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ အချိန်ချွေတာခြင်း (အားလုံးထောင့်ကြိတ်ခြင်းဖြင့်ပြီးစီးအောင်တည်ဆောက်ခြင်း)၊ တူးဖော်ခြင်းအစွန်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ကောင်းမွန်တိကျမှု။
ကြိတ်ဆုံအကွာအဝေးသည်φ 5-φ 32 ဖြစ်သည်
၁။ လည်ပတ်နေသောစားပွဲသည်စားပွဲတင်တည်ငြိမ်ပြီးလွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်သည့်တင်သွင်းသောတိကျသော linear ball slide rail ကိုလက်ခံသည်။
၂။ စက်ကို grinddrillbit, screwtap, end-millingcutter.R-shapedturningtool, R-shapedmillingcutter, hobbling knife, round paper cuttingknife ကဲ့သို့စက်ဖြင့်ကြိတ်ရန်မတူညီသော fittings များနှင့်တွဲနိုင်သည်။
3. Themotorcanrotate360, Thetwosidesofthemotorcan ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဘီးများဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ မတူညီသောပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများကိုသင်ကြိတ်သောအခါ၊ လုံခြုံရေးကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်သောမော်တာကိုလှည့်ခြင်းဖြင့်ကြိတ်စက်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
၄။ ItadoptstheFC30castironofhightoughnesstomain ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်တိကျမှန်ကန်သောစက်ကိရိယာ ၅။ ကြိတ်စက်၏အမြင့်ဆုံး linear speed သည် 40m/s ဖြစ်သည်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများ၊ မော်တော်ကားလောင်စာဆီစနစ်များ၊ ဖန်ထည်လုပ်ငန်းနှင့်အခြားအပလီကေးရှင်းများစွာသည်ခိုင်မာသော carbide ပုလွေမှုတ်စက်များဖြင့် gundrilling ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည်။ tubular ဆောက်လုပ်ရေးသုံးသေနတ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစွန်အဖျားတွင် braze joint မရှိခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်သောအားသည်ပိုမိုထိုးဖောက်မှုနှုန်းနှင့် tool life ကိုပေးသည်။ သို့ရာတွင်ဤကဲ့သို့သောအချင်းသေးငယ်သည့်သေနတ်လေ့ကျင့်မှုများသည်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်တိကျသောလည်ပတ်မှုသတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ဤအရာကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်ကျွမ်းကျင် application application engineering ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းမြောက်ပါသည်။
လည်ပတ်နေသောဇယား၏ဘေးတိုက်ခရီးသွား ၂၇၀ မီလီမီတာ
လည်ပတ်မှုဇယား၏ Longitudinal ခရီး ၁၇၀ မီလီမီတာ
လည်ပတ်မှုဇယား၏ဧရိယာ ၁၃၀*၆၀၀ မီလီမီတာ
Wheel Head ၏အကွာအဝေးကိုမြှင့်တင်ပါ ၁၄၀ မီလီမီတာ
ဘီးခေါင်း၏ Rotating Angle ၃၆၀ ဒီဂရီ
ကြိတ်စက်ဘီးအရွယ်အစား ၁၂၅*၅၀*၃၂ မီလီမီတာ
ကြိတ်စက်၏အရှိန် ၂၈၀၀ RPM
အသားတင်အလေးချိန် / စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၁၄၅/၁၆၀ ကီလိုဂရမ်
ပါဝါ 550w 220v/380v
ယခင်: Indexable Gun Drills များ
နောက်တစ်ခု: BTA Deep Hole Drills များ
1. အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု: ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာအားလုံးသည်သင်္ဘောမစမီတိကျသောစမ်းသပ်မှုမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့မှာစမ်းသပ်စက် ၁၀ လုံးရှိတယ်။
၃။ ချက်ချင်းဖြေကြားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်သောသင်၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ကိုအကြောင်းပြန်ပါလိမ့်မည်။
4. OEM & ODM လက်ခံသည်။ ငါတို့သည်သင်ပုံဆွဲသည့်အတိုင်းကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
၅။ သင်၏အရောင်းဧရိယာ၊ ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်အားလုံးကိုကာကွယ်ပါ။
၆။Gun drill ၀ န်ဆောင်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ထိပ်ဖျားလုံးပတ် (မီလီမီတာ) Carbide အရှည် (မီလီမီတာ) ကြိတ်ထားသောအရှည် (မီလီမီတာ) သည်းခံစိတ် (မီလီမီတာ)
၃.၀၂ ၂၄.၂၃ 21 ± ၁
၄.၀၂ ၂၆.၂၅ 23 ± ၁
၅.၀၂ ၂၈.၆၄ 25 ± ၁
၆.၀၂ 34 30 ± ၁
၇.၀၂ 34 30 ± ၁
၈.၀၂ 38 33 ± ၁
၉.၀၂ 38 33 ± ၁
၁၀.၀၂ ၃၇.၈ 34 ± ၁
၁၁.၀၂ ၃၇.၈ 34 ± ၁
၁၁.၅၂ ၃၇.၈ 32 ± ၁
၁၂.၀၂ ၃၇.၈ 33 ± ၁
၁၂.၅၂ ၃၇.၈ 33 ± ၁
၁၃.၀၂ ၃၇.၈ 32 ± ၁
၁၄.၀၂ ၄၂.၅ 36 ± ၂
၁၅.၀၂ ၄၈.၆ 38 ± ၂
၁၆.၀၂ ၄၈.၆ 38 ± ၂
၁၇.၀၂ ၄၇.၈ 36 ± ၂
၁၈.၀၂ ၄၇.၈ 34 ± ၂
၁၉.၀၂ ၄၇.၈ 34 ± ၂
၂၀.၀၂ ၄၇.၈ 33 ± ၂
၂၁.၀၂ ၅၆.၅ 44 ± ၃
၂၂.၀၂ ၅၈.၈ 45 ± ၃
၂၃.၀၂ ၅၈.၈ 45 ± ၃
၂၄.၀၂ 60 45 ± ၃
၂၅.၀၂ ၆၁.၈ 45 ± ၃
၂၆.၀၂ ၆၂.၆ 45 ± ၃
၂၇.၀၂ ၆၂.၄ 45 ± ၃
၂၈.၀၂ ၆၃.၃ 45 ± ၃
၂၉.၀၂ 64 45 ± ၃
၃၀.၀၂ 65 45 ± ၃
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သော tungsten carbide series ထုတ်ကုန်၊ အကျယ်ဆုံးထုတ်ကုန်အကွာအဝေး၊ အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း၊
2. တင်ပို့မှုမတိုင်မီ 100% QC စစ်ဆေးခြင်း၊
24 နာရီအတွင်း 3.Feedback နှင့်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂလိပ်ဆက်သွယ်ရေး၊
၆။ တရား ၀ င်အမိန့်နှင့်အသေးစားအမိန့်ကိုလက်ခံပါ။
၇။ T/T၊ L/C၊ အနောက်ဘက်ပြည်ထောင်စု၊ Paypal၊ ကုန်သွယ်ရေးအာမခံစသည့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များအားလုံးကိုလက်ခံပါ။
၉။ ကုန်ပစ္စည်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအီးမေးလ်သည်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုနားထောင်ရန်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီပေးပို့လိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၀ ယ်သူတိုင်းကျေနပ်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအနိုင်ရသည်။
Dezhou Drillstar Cutting Tool Co. , Ltd သည်သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ သေနတ်ဖောက်စက်များ၊ BTA၊ Trepanning၊ ပျင်းစရာကောင်းသောကိရိယာများ၊ ဓားမြှင့်ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နက်ရှိုင်းသောအပေါက်ဖြတ်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဖြတ်တောက်ထားသောအဆီ၊ ရှုးစက်၊ ဆီဖြန်းစုပ်စက်အစုံကိုနက်ရှိုင်းသောအပေါက်တွင်း၌ဖြန့်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်သူများအားအကောင်းဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်အရည်အသွေးကိုပေးနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးပုံစံများဖြင့်နိုင်ငံတကာဒီဇိုင်းစံနှုန်းများနှင့်အညီဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဥရောပနှင့်အခြားသူများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ရှိုင်းသောအပေါက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများအတွက် One-Stop solution provider ဖြစ်ပြီးဤအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Tungsten Carbide Tips & Rods နှင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကမှအခြားကုန်ကြမ်းများကိုတင်သွင်းသူဖြစ်သည်။
Q1: tungsten carbide ထုတ်ကုန်များအတွက်အာမခံချက်ကဘာလဲ။
A1: ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျီ omet မေတြီအတိုင်းအတာများကိုထိန်းချုပ်ရန် high precision grading machine ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်အာမခံနိုင်သည့်အရည်အသွေးမြင့်အပေါ်ယံအလွှာများဖြင့်ခြယ်သထားသောအလွန်ကောင်းမွန်သောအဆင့်မြင့်အလွှာများကိုသုံးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပို့ဆောင်စရိတ်နှင့်အစားထိုးခြင်းကိုခံယူလိမ့်မည်။
A2: ဟုတ်ပါတယ်၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖောက်သည်များပေးဆောင်သောကုန်စည်အခြေအနေအောက်တွင်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အခမဲ့နမူနာများပေးသည်။
Q3: မင်းရဲ့အနည်းဆုံး order order လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ။
A3: ငါတို့သည် quotation စာရွက်ရှိပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက် MOQ ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာနှင့်စမ်းသပ်မှုအမိန့်ကိုလက်ခံသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခု၏အရေအတွက်သည် MOQ သို့မရောက်နိုင်ပါကစျေးနှုန်းသည်နမူနာစျေးနှုန်းဖြစ်သင့်သည်။
A4: ၎င်းသည်ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ အကယ်၍ လိုအပ်သောပစ္စည်းများမှာ stock ရှိလျှင်၊ ပေးပို့ချိန်သည် ၈ ရက်အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ပေးပို့ချိန်မရှိလျှင်အလုပ်ရက် ၂၀ ခန့်ရှိလိမ့်မည်။
Q5: သင် carbide Special-shaped ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သလား။
A5: ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အဆင့်မီစက်များနှင့်အထူးကိရိယာနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုံနမူနာများနှင့်အညီ၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
A6: ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့အပတ်တိုင်းမင်းရဲ့အော်ဒါရဲ့အလုပ်အချိန်ဇယားကိုပို့လိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းမတင်ပို့မီပျက်စီးခြင်းနှင့်ပျောက်ဆုံးခြင်းများရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ အမှာစာ၏အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းဓါတ်ပုံများကိုပေးပို့ခြင်းမပြုမီသင်၏အတည်ပြုချက်အတွက်သင့်ထံပို့လိမ့်မည်။
တင်သွင်းသောသေနတ် bit နှင့် tool rod tungsten carbide ...
Coolant Gundrill နှင့်အတူပုလွေ